Warbaahinta Bulshadu waa Macdanta Dahabka ee Suuqgeynta Caymiska | Martech Zone
Axad, Maarso 30, 2014 Isniin, Maarso 31, 2014 Douglas Karr
At Dunida Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada sanadkan, ku soo noqoshada maalgashiga waxay ahayd isku xir guud inta badan fadhiyada iyo doodaha ka socda shirka. LeadSift waa madal awoodsiisa iibinta bulshada iyadoo la dhageysto lana gaarsiiyo horseedyo suurtagal ah shirkadaha. Tusaalahan, LeadSift wuxuu ka soo ururiyey aragtiyo in kabadan 3.7 milyan oo tweets iyo taxane daraasado cilmi baaris ah si loo muujiyo awooda iibinta bulshada ee ka dhexjirta warshadaha caymiska.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu awoodda badan warbaahinta bulshada waa taxanaha isbeddellada iyo qaababka laga abuuray xogta weyn. Hawlgal kasta, tweets kasta iyo isdhexgal kasta ayaa isku dhafan si loo abuuro waxa aan u tixraacno xog weyn. Iyadoo loo marayo falanqeyn taxaddar leh, LeadSift ayaa daahfurtay isbeddello ku yimid xogta shirkadaha caymiska ay ka faa'iideysan karaan si ay uga waxtar badan yihiin uguna hufan dadaalkooda suuq-geynta iyo iibinta.
Tags: aflacallstateavivageicosuuqgeynta caymiskanafleydadalka oo dhanhorusocodwarbaahinta bulshadabeeraha gobolkadawlad -goboleednolosha qorraxda